Nhau - North American PCB Maindasitiri Ekutengesa Kumusoro 1 Percent munaNovember
Yekuchamhembe kweAmerican PCB Indasitiri Kutengesa Kumusoro 1 Percent munaNovember
IPC yakazivisa zvakawanikwa munaNovember 2020 kubva kuNorth American Printed Circuit Board (PCB) Statistical Chirongwa. Iyo bhuku-kune-bhiri reshiyo inomira pa1.
Yese yekuNorth America PCB inotumirwa munaNovember 2020 yakakwira 1.0 muzana ichienzaniswa nemwedzi mumwecheteyo gore rapfuura. Kuenzaniswa nemwedzi wapfuura, kutumirwa kwaNovember kwakadonha ne2,5 muzana.
Pcb bookings munaNovember yakakwira 17.1 muzana gore-pamusoro-gore uye yakawedzera 13.6 muzana kubva mumwedzi wapfuura.
"Kuburitswa kwePBB uye maodha anoramba achishanduka asi achiramba achienderana nezvazvino," akadaro Shawn DuBravac, nyanzvi yezvehupfumi yeIPC. "Kunyange zvinhu zvakatumirwa zvakatsvedza zvishoma pazasi pevhareji ichangoburwa, odha dzakakwira pamusoro peavhareji uye dzakakwira ne17 muzana kupfuura gore rapfuura."
Yakadzama Dhata Inowanikwa
Makambani anotora chikamu muIPC yeNorth American PCB Statistical Chirongwa anokwanisa kuwana zvakadzama zviwanikwa paPBB yakaoma uye anotenderera wedunhu kutengesa uye maodha, kusanganisira akapatsanuka akaomarara uye anochinjika ebhuku-kune-bhiri ratios, kukura kwemaitiro nemhando dzechigadzirwa uye hukuru hwekambani tiers, kudiwa kwema prototypes , kukura kwekutengesa kumisika yemasoja neyekurapa, uye imwe data yakakodzera nguva.
Kududzira iyo Dhata
Iwo bhuku-kune-bhiri ratios akaverengerwa nekukamura kukosha kwemirairo yakanyoreswa pamusoro pemwedzi mitatu yapfuura nemutengo wekutengesa wakabhadharwa panguva imwecheteyo kubva kumakambani muIPC yekuongorora sampuro. Chiyero chinopfuura 1.00 chinoratidza kuti kudiwa kwazvino kuri pamberi pekupihwa, chinova chiratidzo chinoratidza kukura kwekutengesa pamusoro pemwedzi mitatu kusvika gumi nemiviri inotevera. Chiyero cheisingasviki 1.00 chinoratidza kutendeuka.
Gore-pagore uye gore-kusvika-padanho rekukura mareti rinopa maonero anonyanya kukosha ekukura kwemaindasitiri Kuenzanisa kwemwedzi-kusvika-mwedzi kunofanirwa kuitwa nehungwaru sezvo zvichiratidza mhedzisiro yemwaka uye kusagadzikana kwenguva pfupi. Nekuti kubhuka kunowanzo kuve kwakachinjika pane kuendesa, shanduko mumabhuku-kune-bhiri ratios kubva pamwedzi kusvika pamwedzi inogona kunge isingakoshe kunze kwekunge maitiro emwedzi inopfuura mitatu akateedzana ari pachena. Izvo zvakakoshawo kuti utarise shanduko mune ese maviri mabhuku uye kutumirwa kuti unzwisise izvo zviri kutyaira shanduko mubhuku-kune-bhiri reshiyo.